Pakutanga mwedzi - kutanga nepachinko yaiitirwa yacho inoti (kupora nguva kana akazaruka-upenyu)
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Pakutanga mwedzi - kutanga nepachinko yaiitirwa yacho inoti (kupora nguva kana akazaruka-upenyu)
※ Kana wanga kungotaura vakajaira kuenda sezvinoita kuitika yose indasitiri kufadza
nepachinko yokumusoro iri reference, asi handina kunge wakacherechedza, ari nepachinko yokumusoro, uye nguva uye nyore mutambo, kuchava uye kana hazvisi . Paakataura apo kuti kana nguva game, kuti kuzviziva, ndikakudururirai uyai zvakafanira kuongorora yebhizimisi urongwa nepachinko yaiitirwa.
vakanzwawo chero indasitiri, pane chinhu inonzi uyewo basa urongwa mune nepachinko yokumusoro, uyewo pose nepachinko yokumusoro, tiri kushanda pahwaro basa iri urongwa. zvakawanda chakakomba purofiti, uye uchishandisa urongwa apo uye sei kuti apore, unogona kuona zvakawanda nepachinko yokumusoro kuti mumire nomwedzi wokutanga sei. Ibasa Chirongwa mwedzi mumwe kusvikira pakuguma mwedzi kubva pamwedzi wokutanga.
kuti vabudirire yakawanda sezvingabvira ichi urongwa basa, isu nguva nguva uye kuunganidzwa zviitiko, enda nehasha akasarudza. Ichokwadi, nokuti hurongwa, zvirege kushanda. Asi, chokwadi chakadaro chete asingashandi ndiko nepachinko yaiitirwa. In
, kutanga mwedzi nepachinko yaiitirwa ndiko, kuti mabhizimisi mhando kwaiva kuenda, ndinoda kuona. Kutanga mwedzi nepachinko parlors, ine bhizimisi dzakangwarira hazvishamisi. Kubva pakutanga romwedzi, nekuti hatigoni ape dhefisiti. Mbambo kuchinja, zvitoro kazhinji chipikiri kuchinja panguva nderei, zvimwe vobuda kuzoona tafura Data aizoita iwe duku tightening.
slots Izvi zvinoshandawo, kazhinji, akaisa 1, nokuti zvichida kubva tafura, une Uchinaoshi kana zvakadaro chete kurongwa. Pakutanga mwedzi uye iri nepachinko parlors, nepachinko zvose slots, kudzivirira Desugi chisingatarisirwi, ndiko Awayokuba ane nguva kuedza nemari urongwa bhizimisi kana kupfuura kwakakomba purofiti.
Saka, izvozvo zvichaita muitiro pusa okutengesa.
Zvechokwadi, hazvirevi kuti ichatsedukira sezvo muchina ndakafunga, panewo nyaya kuti vachabuda. Zvisinei, kunyange kana izvozvo, zvakawanda pasina kana sungisa zvakazara zvipikiri, panewo kuona sei kumira. Total uye Kana ini, nepachinko parlors zviri gasi-akaremerwa nyaya pakutanga romwedzi kungangova diki. Chete, kuti adzivirire chakaipa mabhizimisi kumhanya.
pano, pane pfungwa Ndinoda pfungwa.
izvozvo, kutanga mwedzi nepachinko yaiitirwa ndechokuti chakaipa mabhizimisi mamiriro muchitoro. Pasina akagadzirira kuisa ikoko, asi izvozvo ndizvo nzvimbo zvisingazovi pfungwa kusimbisa pakupora kusvikira ikoko. Umwe zvitoro kuti kuenda kuridza hwandaiva chipikiri kugadzirisa uye zviruva mamiriro ezvinhu ari, panewo imwe nguva sokuti zvakajeka. Pakutanga mwedzi iri, unogona kunzi nguva iri nani, rave kuonekwa vakawanda kuti vazive muchitoro. Kunyange
chipikiri kuchinja, kana kuonekwa kuburikidza mwedzi mumwe chete, kunyanya pakutanga romwedzi ezvinhu, wakashama ndiko, zvinoita kuti zvive nyore kuti kutongwa vari akasungirirwa. Zvisinei, sezvo gasi-zvitoro panze haisi musiyano kukwana, kunokonzerwa iri kunyanya mubhizimisi, yava nguva kuti zvisingagoni inokurudzirwa. Pakutanga mwedzi, pasina guru mutambo, iwe nani vakazvipira kwariri kuchengeta nepachinko parlors.
Zvechokwadi, nokuti guru nguva haisi pezvaaitsigira kuti kupora, kana iwe pano Shumirai, unogona dzimwe nguva kuedza rova. Akakunda pakutanga mwedzi, mutambo nguva mwedzi mumwe, edza kuona zvakasimba. Hazvina nguva kuti havakwanisi kufanira. Pakutanga mwedzi, pasina guru mutambo, iwe nani vakazvipira kwariri kuchengeta nepachinko parlors.
Zvechokwadi, nokuti guru nguva haisi pezvaaitsigira kuti kupora, kana iwe pano Shumirai, unogona dzimwe nguva kuedza rova. Akakunda pakutanga mwedzi, mutambo nguva mwedzi mumwe, edza kuona zvakasimba.